OwePirates ugaqelwe yiRichards Bay neSekhukhune - Impempe
OwePirates ugaqelwe yiRichards Bay neSekhukhune
June 22, 2022 Impempe.com
UTshegofatso Mabasa, we-Orlando Pirates, kulindeleke ukuthi alishiye iqembu abolekise kanti mabili amaqembu eDStv Premiership amgaqele ngokusho kweSABC Sport.
Kuze kube yimanje iBucs seyiqinisekise ukufika kwabadlali abayisikhombisa kulandela ukwamukela uNkosinathi Sibiya, uTapelo Xoki, uMiguel Timm, u-Eva Nga, u-Evidence Makgopa no-Azola Matrose, emizameni yokuwina izicoco.
Nokho konke lokho bangase bakwenze ngaphandle kukaMabasa osevele wehlela le kude uma kubalwa abadlali beBucs. Ukufika kukaMakgopa noNga akumsizini kakhulu lo mgadli ukuthi angasithola isikimu ngesizini ezayo.
Nokho iSABC Sport ibike ukuthi lo mgadli oneminyaka engu-25 ngeke ashode ngeqembu njengoba kunamaqembu amabili ePremiership, iRichards Bay neSekhukhune United, agaqele ukumsayinisa njengomdlali obelekisile ngaphambi kokuthi kuqale isizini ka-2021/2022.
UMabasa ukwaze ukudlala imidlalo engu-22 ngaphansi kwabaqeqeshi abebebambile uMandla Ncikazi noFadlu Davids. Nokho eminingi yale midlalo uyidlale esuka ebhentshini nokuyisizathu esenze ukuthi ashaye amagoli amathathu kuphela ngesizini edlule.
Ushaye amagoli ayisishiyagalolunye ngesizini eyandulela edlule nokuyinto emenze wabizwa njalo kwiBafana Bafana.
IRichards Bay yiqembu elisha kwiPremiership kanti lizofuna ukuqinisa isikwati salo ukuze lingabuyeli emuva lisadlale isizini eyodwa kwiligi ephezulu. Ngakolunye uhlangothi iSekhukhune sekuyisizini yayo yesibili kanti isanda kuqasha umqeqeshi uKaitano Tembo.
Kuyavela ukuthi sekuseduze ukuthi iPirates iqede ngesivumelwano sokuthi uMabasa abolekiswe. ULinda Mntambo naye kuyaxoxwa naye futhi angase azithole esesimeni sikaMabasa.
Previous Previous post: IChiefs seyethule omunye umdlali, iRoyal AM ifuna ibuyise uSolomons
Next Next post: UMaMkhize akaneme ngezinto ezithile kwiRoyal AM, usebize umhlangano